Ajaanibka shaqada la’ ayaa markii ugu horeysey ka batey dadka iswiidhishka ah ee shaqo la’aanta ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Sawirka : BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT
Ajaanibka shaqada la’ ayaa markii ugu horeysey ka batey dadka iswiidhishka ah ee shaqo la’aanta ah
La daabacay torsdag 11 februari 2016 kl 10.39
Warbixin uu soo saarey xafiiska shaqada ayaa lagu sheegey in shaqa la’aanta dalkaani hoos u sii dhaceyso,xafiiska ayaa intaas ku darey in dhallinyarada dalkaan shaqa la’aanta ku ahi ay tira ahaan marayaan meeshii ugu hooseysey ilaa laga soo bilaabo sanadkii 2009-kii.
Dadka iyagu dalkaan dibaddiisa ku dhashey ayaa dhibaatooyin waxay ka heystaan dhanka shaqo helidda.
Mats Wadman waa madax qeybeed ka hawlgala xafiiska shaqada:
-bishaan fabraayo gudeheeda ayaa markii ugu horeysey dadka shaqa la’aanta ah ee asal ahaan ka soo jeeda dalkaan dibaddiisu waxay ka badanayaan ama dhaafayaan dadka shaqa la’aanta dalkaan ku ah ah ee asalkoodu iswiidhishka yahay.
Dhammaadkii bishii hore ee janaayo ayaa waxaa dalkaan shaqo la’aan ku ahaa dad gaaraya 386.000 oo qof tiradaas oo ilaa iyo 4000 oo qof ka yar dadkii isla xilligaas sanadkii hore dalkaan ku shaqo la’aa.
Kala bar dadkaas hadda shaqa la’aanta ah ayaa waxay ku dhasheen dalkaan dibaddiisa,waxayna dhawaan noqonayaan aqlabiyadda ugu badan ee shaqo la’aanta ah kana diiwaangashan xafiiska shaqada taas oo ah arrin aan waligeed horey dalkaan uga dhicin.
Dhanka kale maadaama ay dadka dalkaan dibaddiisa ku dhashey u bateen dadka shaqa la’aanta ah ee ka diiwaan gashan xafiiska shaqada ayaa taasi waxay raad ku yeelaneysaa xafiiskaasi sidii uu shaqooyin ugu heli lahaa dadkaas. Mats Wadman oo arrintaas ka hadlaya ayaa sheegey:
-Maadaama dadkaas shaqa la’aanta ah ee dalkaan dibaddiisa ku dhashey ay sii badanayaan, ayna yihiin dad waxbarasha ahaan hooseeya ,xogaa arrinkaasi wuxuu noqon doonaa mid aan sahlaneyn ,ayuu yiri Mats Wadman.